Androany amin'ny fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, parkingRadar | Androidsis
Fampiharana Android mahatalanjona: ParkRadar Androany
Miverina amin-kery amin'ity fizarana ity isika Androidsis izay ahitanao ny tsara sy be indrindra fampiharana mahatalanjona ho an'ny rafitra fiasa Android. Amin'ity fotoana ity dia te-hanolotra mihoatra ny fampiharana manaitra aho, fitaovana iray tena ilaina izay kendrena ho an'ny mpamily rehetra amin'ireo tanàna lehibe izay ny tsy fahafahana mahita toerana fijanonana maimaimpoana dia mahatonga antsika kivy.
Ny fampiharana apetraka dia azo jerena maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store, fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android, mitondra ny anarana hoe fijanonana.
Inona no omen'ny aparcaRadar antsika?
ParkRadar, dia, araka ny nolazaiko taloha kelin'izay, izy io dia iray amin'ireo fampiharana na fitaovana ho an'ny Android, kendrena amin'ireo mpamily amin'ny tanàna lehibe, izay manampy hahita an'io toerana fijanonana maimaimpoana io sarotra tokoa ny mahita any amin'ny tanàna Espaniola lehibe.
Ny fampiharana dia miasa amin'ny fomba izay rehefa mpampiasa ny fijanonana mamela ny toerana fijanonan'ny fiara izay nibodo maimaimpoana, ny fampiharana tsy mila fidiran'ny mpampiasa akory, mandefa fampandrenesana ho an'ny mpampiasa rehetra ny fampiharana izay ao amin'ny faritra, Fanamarihana Luna amin'ny alàlan'ny fampandrenesana dia mampitandrina antsika ny fisian'io toerana fijanonana io izay nilaozana ary noho izany dia mijanona ho afaka ampiasaina amin'ny mpamily mahay na tsara vintana.
Ity fampandrenesana mavitrika ity, raha tsindrio eo dia hasehony antsika marika ny maody amin'ny sari-tany, ilay tranonkala ary toerana tena misy ny toerana fijanonana maimaimpoana nandao fotsiny ilay mpampiasa fampiharana iray hafa.
Raha ny lojika, ny fampandrenesana izay haseho amintsika amin'ny sari-tany dia hifanaraka amin'ireo toerana fijanonam-bidy maimaimpoana nafoin'ny mpampiasa mavitrika aparcaRadar. Toerana malalaka sasantsasany izay haseho antsika fotsiny ao a radius manodidina ny 1000 metatra manodidina ny toerana misy antsika ankehitriny ary raha nilaozana izy ireo tao anatin'ny 20 minitra farany.
Tsy misy fisalasalana fijanonana Hevitra tena tsara sy hevitra fampiharana ho an'ireo mpamily sahirana rehetra izay miafara amin'ny fandaniam-potoana mandritra ny ora maro mandritra ny fotoana fitadiavana toerana malalaka. Fampiharana iray izay mitombo tsikelikely ny fampidinana, efa manodidina ny Fisintonana mavitrika 5000 ao amin'ny Google Play Store, ary mampanantena izany fa ho mpiara-miasa lehibe sy ilaina ho an'ireo mpamily mahafoy tena rehetra izay manadio ireo tanàna lehibe any Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fampiharana Android mahatalanjona: ParkRadar Androany
Sivanina ny antsipirian'ny Honor 7 Plus
Fomba fampiasana ny Launcher Lab, lesona 6: Mamorona Widget mozika ho antsika manokana